Malmö: weerarada lagu hayo dadka soo galootiga | Somaliska
Booliiska Sweden ayaa sheegay in weeraro ka dhacay magaalada Malmö sanadkaan gudahiisa lagu bartilmaameed sanayahay dadka soo galootiga qaasatan dadka madoow, ayadoo weerarkii ugu dambeeyay uu shalay ka dhacay magaalada. Shalay ayaa 3 qof lagu dhaawacay magaalada Malmö ayadoo la sheegay in dhamaan dadka lala eegtay weerarka ay ahaayeen kuwo soo galooti ah. Wiil 19 jir ayaa loo xiray weerarkii shalay. Dadka lala eegtay weerarka ayaa sheegay in aysan helin wax digniin ah oo ku wajahan ayaga, ayagoo sheegay in weerarka lagu soo qaaday ayagoo danahooda iska wata. Weeraradan nuucaan ayaa dadka soo galootiga ah ku abuuraya walwal xaga amaanka ah, ayadoo sida caadada ah lagu tiriyo magaalada Malmö in ay tahay magaalooyinka ugu amaanka xun dalka Sweden.
Booliiska Sweden ayaa sheegay in weeraro ka dhacay magaalada Malmö sanadkaan gudahiisa lagu bartilmaameed sanayahay dadka soo galootiga qaasatan dadka madoow, ayadoo weerarkii ugu dambeeyay uu shalay ka dhacay magaalada.
Shalay ayaa 3 qof lagu dhaawacay magaalada Malmö ayadoo la sheegay in dhamaan dadka lala eegtay weerarka ay ahaayeen kuwo soo galooti ah.
Wiil 19 jir ayaa loo xiray weerarkii shalay.
Dadka lala eegtay weerarka ayaa sheegay in aysan helin wax digniin ah oo ku wajahan ayaga, ayagoo sheegay in weerarka lagu soo qaaday ayagoo danahooda iska wata.
Weeraradan nuucaan ayaa dadka soo galootiga ah ku abuuraya walwal xaga amaanka ah, ayadoo sida caadada ah lagu tiriyo magaalada Malmö in ay tahay magaalooyinka ugu amaanka xun dalka Sweden.